"Iphupho Oblomov sika", isifinyezo sezinto
Oblomov lesitsetfwe enovelini eponymous ngu IA Goncharova - samuntu ukuphila umFilisti. Le nsizwa, umnikazi wezwe, ehamba phambili "ucabangisisa" indlela yokuphila, okusho lutho ephelele. The hero is abadliwa lesi simo, kodwa ukuze alwe ngokwako akusiyo ekwaziyo. Engxenyeni yokuqala kule noveli, esahlukweni 9, umlobi liyakhuluma ngokuphela kumiswa sinesimo sengqondo Oblomov, izinhloso ekuphileni kwakhe. Isahluko ngokuthi "Iphupho Oblomov sika", isifinyezo sezinto kunjengoba Ilya Ilyich eselala nokuyilapho ephusheni lakhe, umbono okude ebuntwaneni izigcawu: Manor bomdabu, emzaneni Oblomovka. Leli dolobhana etholakala maphakathi ndawo, waya edolobheni eliseduze kwaba cishe abangamashumi amabili Kude lé, futhi ngakho Oblomovs babe luphambene nakho konke izinhlobo amathonya uthuthuka, amakhulu amaningi eminyaka abantu wahlala uhlelo lapho indoda iyikhanda lomndeni, babekholelwa sina-ze futhi ezinganekwaneni. Life agelezé drowsily, njengenjwayelo, abalimi wahlala ngokunganaki, njengabantwana, yize ezama, futhi angazanga futhi engafuni okunye ukuphila.
Umnikazi izindlu, Oblomov, Sr., akazange zihluke serfs zabo, yakhombisa ubuvila nevilaphayo. imisebenzi yakhe yansuku zonke - ukuhamba noma ngihleli iwindi. Zonke izithakazelo umndeni - adle, futhi ulale kahle, amakhefu kancane enza imisebenzi yasendlini. Abazali wamenqabela ukwenza Ilyusha bahlanganyele kunoma yiluphi izindaba lowo kamuva kwakhiwa kuye esihlobene ineradicable, okuyinto oye wahlushwa akusizanga Oblomov - ubuvila. Ngo emzini wabazali bakhe abazange ulihlanganisa ukubaluleka nemfundo kanye kumiswa ingakabi nayo indlalifa, e Oblomov ngokungathandi ngaya esikoleni, umsebenzi wesikole bamsiza ukuba wakhe omkhulu - Andrey Shtolts, indodana ka uthisha.
"Iphupho of Oblomov", sifinyeto okuyinto eboniswe ngenhla, iyona incazelo kuyindida "zepharadesi emhlabeni". Kulesi sahluko umbhali waphakamisela ihlekisa ngabandayo, yokuphila abapholile iningi abanikazi bamazwe isikhathi.
Nokho Goncharov kuvezwa iqhawe lakhe akusilo uhlamvu ezimbi. Isimo komlobi ke Yiqiniso, izindawo okukhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo esidabukisayo. Ngo Oblomov kwadingeka zonke ezazidingeka sokuthuthukiswa umuntu asebenzayo futhi abafundile. Esahlukweni "Iphupho Oblomov sika", sifinyeto inkulumo mayelana it is okukhulunywa ukuthi Ilya Ilyich ebuntwaneni eseyingane curious kakhulu, ngokujika olusankondlo kwengqondo, Nokho, imfundo kwabazali ngokuhlehlisa konke amathalenta nemvelo-esinikeziwe, futhi kwasala kungenzeka ukubukela Swirl zokuphila izenzakalo kusukela induduzo lombhede. Real ukuphila uhlamvu lingachazwa ngawona lawo mavi lwekhanda "Iphupho Oblomov sika". Umbhalo isifinyezo onikelwa ngenhla okuqukethwe ngokuphelele ephawula yokuphila wavuthwa Ilya, kuphela endaweni yesehlakalo ishintshile. Uye wazama ngokuphindaphindiwe ukushintsha uhlamvu yayo, unqobe nokunganaki, sizifundise, kodwa zonke izinhloso zakhe futhi ngenxa yalokho waqhubeka. Wayala incwadi elele emashalofini, ungalokothi evulekile, nokuhlanzeka egumbini incike ngokuphelele inceku Zakhar, Ukuvakashela Oblomovka lwakubo zonke lihlehliselwe isikhathi esingaziwa.
"Iphupho Oblomov sika", okuyinto inika isifinyezo imibono mayelana nomkhathi umfana omncane, abagxeki abaningi cabanga ibika noveli, njengoba kulesi sahluko uchaza kafushane yonke yokuphila ikusasa protagonist, akunakwenzeka ukuba ukucabanga nesimo ke. Ngokungafani ubuthongo, ukufa Oblomov kancane ezichazwe inoveli, mhlawumbe ngoba into ekuphileni kwakhe osekwenzekile kakade. Kwakungekhona ngisho ukufa, kodwa ukuphela khona, "uma ukhohlwa ukuqala iwashi ngosuku olulodwa."
"Iphupho Oblomov sika" Amazwibela uchaza izigaba yentuthuko yobuntu bethu eliphansi, ubonisa esinye sezibonelo eziningi kanjani imvelo elibuhlungu ebhubhisa engcono izimfanelo zomuntu emvinini.
Uhlobo "omegavers". Kuyini lokhu? Izici nomlando nesenzakalo
"Isibhakabhaka ka Austerlitz" - ashintshe indlela ukuhlobanisa imibono ka-Prince Andrew
Umbhali Soviet Yevgeny Permyak. Biography, ikakhulukazi lokusungula, yezinganekwane izindaba Evgeniya Permyaka
Uhlu lwezincwadi intsha. izincwadi Kuhle ngothando teen - uhlu
Popular umbhali American Dzheyms Rollins: zonke izincwadi ukuze
Indlela ukususa iphasiwedi kusukela e-Excel ifayela: zindlela ezilula ezimbalwa
Tachycardia - isifo okungukuthi esilaphekayo
Robot cleaner wezindlu. Izibuyekezo
Solidolovaya wamafutha: yokusetshenziswa, okuba nemiphumela engemihle. Wamafutha for psoriasis
Yimaphi ama-tattoos amancane adumile kumantombazane?
Imigomo Literary: yini bokungafani
Uhambo oluya Primorsk. Azov Sea ngokufudumele iyakwamukela izivakashi
Awazi kanjani ukusebenzisa wokukhanya "Maynkraft"? Incazelo enemininingwane ukukusiza!
Tale "Sinyushkin kahle": izinhlamvu, isifinyezo, ukubuyekezwa
Indlela ukukhetha isitofu igesi